Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Cardivas သွေးတိုးကျဆေး
Fri, Sep 13, 2013 at 9:53 AM
I would like to ask some questions regarding the Cardivas 3.125 mg. I am 40 years old and have6years old son. I suffer hypertension since2years ago. My blood pressure is 150/100. I take medical treatment and the doctor gives me Enam 5, the dosage is two times per day. But the pressure is still high. So, last month, he added Cardivas 3.125 + Enam 5. I asked him that this Cardivas 3.125 is for what? He told me that this is hypertension control pill also. I understand that this is for Heart Disease. Please explain the side effect of Cardivas 3.125 if you haveatime.
• Cardivas သွေးတိုးဆေးဟာ Carvedilol ဖြစ်တယ်။
• Nonselective beta blocker/alpha-1 blocker ဆေးအုပ်စုဝင် ဖြစ်တယ်။
• Congestive heart failure (CHF) အသင့်အတင့်နဲ့ ဆိုးတဲ့ နှလုံးအလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်း အတွက်လဲ သုံးတယ်။
• Carvil (Zydus Cadila), Coreg (GSK), Dilatrend (Roche), Eucardic (Roche), and Carloc (Cipla) စတဲ့ နာမည်တွေနဲ့ ရောင်းတယ်။
• Carvedilol ဆေးကို Heart block နှလုံးပိတ်ရောဂါ အဆင့် (၂) နဲ့ (၃) လူနာတွေကို မပေးရပါ။ Left Bundle Branch Block ဘယ်ဘက်က နှလုံးအာရုံကြောပိတ်တာကို ခေါ်တယ်။
• ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ = ခေါင်းမူး၊ အားယုတ်၊ သွေးဖိအားကျ၊ ဝမ်းပျက်၊ ကြွက်သားအားနည်၊ နှလုံးခုန်နှေး၊ ကိုယ်အလေးချိန်တက်။
သွေးတိုးအတွက် သုံးတဲ့ဆေးတွေက အမျိုးအစားများတယ်။ ဆေးပြောင်းတာ၊ ဆေးအလေးချိန် အတိုး-အလျှော့ လုပ်ရတယ်။ သွေးကျဆေး တမျိုးမက ရောပေးပါမယ်။
Posted by Dr. Tint Swe at 10:32 AM